५ मिनेटमै ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट (दिनहुँ गर्नुस् फिट रहनुस् - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›५ मिनेटमै ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट (दिनहुँ गर्नुस् फिट रहनुस्
१) खुट्टाको औंलाले थिच्ने: खुट्टालाई आराम दिलाउनको लागि तपाईंले यस कसरतलाई गर्न सक्नुहुन्छ । सबैभन्दा पहिला सिधा उभिनुहोस् । त्यसपछि घुँडालाई बिस्तारै खुम्चाई खुट्टाको औंलाले भुइँमा टेक्नुहोस् । यसै पोजिशनमा एकछिन बस्नुहोस् । यस व्यायामलाई दिनको ३ पटक सम्म गर्नुहोस् । २) खुट्टाको औंलाको मद्धतले हिंड्ने: खुट्टाको औंलाको आधार लिई हिंड्ने कसरतले खुट्टाको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ । यो व्यायाम निकै नै सरल छ । यसको लागि कुर्कुच्चा उचालेर खुट्टाको औंलाले टेकेर २० सेकेण्डसम्म हिंड्नुहोस् । त्यसपछि १० – १५ मिनेट आराम लिनुभई फेरी ५ पटकसम्म हिंड्नुहोस् । राम्रो परिणामको लागि दिनको दुईपटक यस कसरतलाई गर्नुहोस् ।
जान्नुहोस् ‘एस’ S बाट नाम सूरु भएका ...
बेलको फाईदा थाहा छ तपाईलाई ? बेलले ...
रेशम चौधरीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगियो
तपाईं ब्लड प्रेशरले चिन्चित हुनुन्छ ? यो हो ब्लड प्रेशर हटाउने मिठो फल , यसरी सेवन गर्नुस